မောင်ရစ် – မြန်မာတိုင်းရင်းသား ကွန်မြူနီတီနဲ့ စိတ်ဝမ်းမကွဲ အတူလက်တွဲကြဖို့ | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်ရစ် – မြန်မာတိုင်းရင်းသား ကွန်မြူနီတီနဲ့ စိတ်ဝမ်းမကွဲ အတူလက်တွဲကြဖို့
(အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင်) ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၅
၂၀၀၉ မှာ အဲသည် အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေ ကျော်လွှားပြီး ကျော်သူ၊ သန်းမြင့်အောင်၊ ဖြူဖြူသင်း၊ သပိတ်အိုင် သီတဂူဆရာတော်၊ ဦးမြင့်အေး စတဲ့ လူမှုရေး စွန့်လွှတ် မြုပ်နှံသူတွေ ထင်ရှားပေါ်ထွန်းလာတယ်။ ၂၀၀၉ မှာ ဒေါ်စုကို အင်းစိန်ထောင်ပို့ပြီး အရေးယူဖို့ စစ်အစုိုးရက ကြိုးစားတယ်။ လူမှုရေး စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွေကပဲ တုိုင်းပြည်အတွက် ထွက်ပေါက်လိုလို ဖြစ်လာတော့ သူနဲ့ ထပ်တူ အရေးပါတဲ့ အမျိူးသားရေး၊ တုိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ အထွေထွေ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ နောက်တန်းမှာ သွားရပ်ရမလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ ကျနော်တို့တတွေကလည်း အများနဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ အမျိူးအစားစုံလင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြန့်ကျက်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ တခုကောင်း ၂ခုကောင်းလောက် စုပြုံလှုပ်ရှားမှုတွေဖက် အားသန်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုချင်တယ်။
လူထုနဲ့ နီးစပ်အောင် တသားတည်း မနေဘဲ အင်တာနက်တွေ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်တွေ၊ ကွန်ပြူတာတွေ၊ နည်းပညာတွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်သူတွေချည်းအချင်းချင်း ကျီးမြှောက်၊ ဘုတ်မြှောက်နဲ့ နေပြီး ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကျေနပ်နေသူတွေဟာ လက်တွေ့ကျကျ မိမိမျက်မှောက်က ကွန်မြူနီတီထဲမှာ တကယ်တမ်း ၀င်ရောက် လှုပ်ရှားစည်းရုံးမှုတွေ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြတော့မှပဲ ကို်ယ်ကိုယ်တိုင် အမြင်ကျဉ်းတာ၊ အထင်လွဲနေတာတွေကို မိမိဘာသာ ရိပ်စား သိရှိ ၀န်ခံမိကြပါလိမ့်မယ်။
ဘာသာရေးသမားတွေကလည်း လူမှုရေးသမားတွေကို သီးခြားသဘောထားတယ်။ လူမှုရေးသမားတွေကလည်း နိုင်ငံရေးသမားတွေကို မတူသူတွေလို ဆက်ဆံတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်းမှာလည်း အကျိူးစီးပွားချင်း မတူညီသူတွေဆိုပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံကြတယ်။ သတင်းသမားတွေ၊ အနုပညာသမားတွေကလည်း အမြင်ချင်း မတူသူတွေအဖြစ် အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ တသီးတခြားနေကြတယ်။ သင်ခန်းစာ တခု ထုတ်ပြရရင် … ၂၀၁၀ မှာ အမေရိကန်ပြည်သန်းကောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ဖို့အတွက် ၂၀၀၈ ကတည်းက စပြီး မြန်မာလူမျိူးစုတွေကို လှုပ်နုိုး နှိုးဆော်တဲ့အခါ အဲသည် သီးခြားအကျိုးစီးပွားတွေက အစုအဖွဲ့တွေကြားထဲ ၀င်ခြားနားကုန်တော့ ကျနော်တို့တတွေမှာ အများအကျိူး (မြန်မာပြည်လူမျိူးစုအားလုံးအကျိုးစီးပွား) ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်မှာ Burmese လို့ တစုတစည်းတည်း စာရင်းကောက်ခံရမယ့်အဖြစ်က ဇာတ်ခေါင်းတွေ ကွဲခဲ့ကြလို့ သိန်းဂဏန်းရှိနိုင်တဲ့ ငဒို့ ဗမာတွေ (တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအ၀င်) သောင်းကျော်နဲ့ မျက်နှာမလှ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
၂၀၁၀ မှာ စစ်အစုိုးရဟာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေကို သွေးခွဲပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆောင် စည်းရုံးခဲ့တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်း အကျိူးစီးပွားချင်း ခွဲခြားပြီး ဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကြုံခဲ့ဖူးသူနဲ့ မကြုံခဲ့ဖူးသူတွေကို ခွဲခြမ်းလိုက်တယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အထွေထွေ အကြပ်အတည်းကြီးတွေအောက်မှာ နွမ်းနယ် ပင်ပန်းနေသူတွေ၊ မိမိ် မိသားစုဝင်တွေ နယ်ဝေးအကျဉ်းထောင်တွေမှာ ရောက်ရှိနေလို့ သောကဖိဆီးနေသူတွေ၊ နိုင်ငံရေးကယ်တင်ရှင်ကြီးအဖြစ် စိတ်ကူးတွေယဉ်ပြီး နိုင်ငံရေးပြဒါးရှင်လုံး ဖြစ်နိုးနဲ့ ဖုိုရ်ထုိုးနေသူတွေ၊ လူမှုရေးသမား၊ ဘာသာရေးသမား၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ အမျိူးအစား အဖုံဖုံ အစားစားကို ခွဲခြား ကန့်သတ်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲကြီး ၀ှဲချီး ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကို ကျနော်တို့ ပြန်လည် စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်သင့်လှပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက် ပြည်တွင်း ပြည်ပက လူထု လူတန်းစားအသီးသီးဟာ ဒါတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကျော်လွှားခဲ့ပြီးပြီ၊ သင်ခန်းစာတွေ ရခဲ့ပြီးပြီ၊ ပညာတွေလည်း အတော်အသင့် ရခဲ့ပြီလို့ မျှော်လင့်ကြည့်ချင်တယ်။ လက်ရှိ မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိူးစု လူထု လူတန်းစားအသီးသီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေနဲ့ မတူ၊ ထူးခြားတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ မုဒိတာစိတ်၊ ဂရုဏာစိတ်၊ ချစ်ခင်ညီညွတ်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ နားစွင့်မှုတွေ၊ နားလည်မှုတွေ ရှိလာတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
အခုတလောမှာ မြန်မာတွေ ကျက်စားတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွေမှာ လူတွေ၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး သွေးခွဲ သွေးကွဲစေတဲ့ ပစ်စာတွေ တဖွဲဖွဲ မိုးတွေ ရွာနေသလိုပဲ။ သည်အတုိုိင်း ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် အတော်ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စာတွေပါပဲ။ သို့သော်လည်း အဲသည်လုို စာတစောင်ရဲ့ အဆိပ်အတောက်ဆိုတာ ကျနော်တို့အချင်းချင်းတွေကြားမှာ နားလည်မှု၊ စာနာမှု၊ ညှိနှိုင်းမှုတွေ ပေးဆပ်ပြီး တည်ဆောက်နေရတဲ့ ကွန်မြူနီတီတခုကို အချိန်မရွေး ပြိုကွဲ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်နိုင်တဲ့ ချိန်ကိုက်ဗုံးတွေဖြစ်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ကွန်မြူနီတီ ကွန်မြူနီတီ လို့ ကျနော်တို့ အာလုပ်ပြုပြောနေတာ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ မိသားစုပါ။ အစုအဝေးပါ။ သမဂ္ဂ သမဂ္ဂီ ပါ။ ကိုယ့်မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ မနေဘဲ ဘယ်နေရာမှာ သွားနေချင်လို့ ရမှာလဲ။
2 Responses to မောင်ရစ် – မြန်မာတိုင်းရင်းသား ကွန်မြူနီတီနဲ့ စိတ်ဝမ်းမကွဲ အတူလက်တွဲကြဖို့
salon on July 2, 2015 at 10:11 am
I hope you can write more stuff like this , I give you my support
ko zaw on July 2, 2015 at 10:32 pm
Thank You. Good Article of analysis to Burmese communities (inside and outside Burma)
I believe, peace agreement will not get in 10 years but important is not to fight large wars. Myanmar army must be patient. .
the most important is less-corrupt government like China.
Chinese government is promoting DASSK.
Myanmar(Burma) can success like S.Korea which is under worry of N.Korea attack.
We also worry of ethnic armies but let them control their territories.
Once, central government is more clean/justice – ethnic army government will change as China Anatomies provinces. Our important states are Kachin, Shan, Kayin, Mon, Rakhine ..etc.